XOG-Maxay Tahay Sababta Xilligaan Ciidanka Somaliland u Galeen Yubbe & Kaalintii Jabhadda Caarre Ka Qaadatay.
March 13, 2019 puntlandnews Somaliland, Wararka Maanta 0
Puntlandnews.net (Hargeysa)-Maalmihii ugu dambeeyey maamulka Somaliland ayaa boqolaal katirsan ciidankiisa difaaca soo dhoobay deegaanka Yubbe ee gobolka Sanaag iyo deegaamo dhowr ah oo hoosyimaada.
Tallaabadaan ayaa siweyn uga caraysiisay xukuumadda Puntland oo dhowr berri oo ay sheegtay inay dulqaadanaysay maanta ku dhawaaqday inay tallaabo ka qaadi doonto ciidanka Somaliland ee soo gaarey deegaamadaasi.
Saraakiisha hogaaminaya ciidanka Somaliland ee ku sugan deegaanka Yubbe ayaa sheegay inaysan ku soo xad gudbin xuduudka Puntland haseyeeshee ay yimaadeen deegaamo Somaliland leedahay ayna gudan doonaan waajibaadkooda qaran sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Puntland dulqaadkii ka dhammaday wuxuuna ugu baaqay shacabka kunool gobolka Sanaag gaar ahaanna Yubbe inay u diyaar garoobaan sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen dadka ku soo duuley.
HADABA MAXAA SABABAY IMAANSHAHA CIIDANKA SOMALILAND E YUBBE
Xog hoose oo ay heshay Puntlandnews ayaa sheegaysa in madaxda maamulka Somaliland ay ka caroodeen dhaqdhaaqyada jabhadda corneal Caarre ay ka wadaan deegaamo katirsan gobolka Sanaag.
Corneal Caarre oo hogaaminaya ciidamo aad u badan ayaa soo dhexmaray gobolka Sanaag wuxuuna howlgallo qorshaysan ka soo fuliyey magaalada Ceerigaabo iyo deegaamo hoosyimaada oo ay kamid tahay degmada Ceel-afweyn.
Somaliland ayaa doonaysa inay ciidankeeda geyso gudaha Puntland si ay uga hortagaan tallaabo kasta o jabhadda Caarre ay ku doonayso inay howlgallo kaga fuliso gobolka Sanaag.